ဟားခါးမြို့ပေါ် (၆)ရပ်ကွက် အတွက်ပြည်သူများမှ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်ရန် မေးမြန်းချက်နှင့် ဖြေကြားချက် – Chin Parliament
Home - Blog - Others
Posted by MMcities
ဟားခါးမြို့ပေါ် (၆)ရပ်ကွက် အတွက်ပြည်သူများမှ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်ရန် မေးမြန်းချက်နှင့် ဖြေကြားချက်
ထန်တလန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)၊ ဦးဗန်ထောင်းမှ ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ပေါ် (၆)ရပ်ကွက် အတွက်ပြည်သူများမှ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်ရန် ခွင့်ပြုငွေကျပ်သန်း(၂၉၀၀)ဖြင့် အောက်ပါလုပ်ငန်း စီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်-
( ခ ) မြို့တွင်းရေပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းခြင်း၊
( ဂ ) Control box များ တည်ဆောက်ခြင်း၊
(ဃ) ရေမီတာများ တပ်ဆင်ခြင်း၊
( င ) မြို့အနီးရေထွက်၄ခုမှ သောက်သုံးရေသွယ်ယူပေးခြင်း၊
( စ ) အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ယူတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊
ယင်းလုပ်ငန်းများအား ယနေ့အထိ(၃)နှစ်ကြာသည် အထိပြီးစီးမှုမရှိခြင်း၊ မြို့သူမြို့သားများ ရေရမှုမရှိခြင်း၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရဌာနမှ တာဝန်ရှိသူအား စစ်ဆေး ဖော်ထုတ် အရေးယူမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဒေသခံလူထု မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသဖြင့်ယင်းကိစ္စအား သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင် ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ပါအချက်များအား သိရှိလို ပါကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်း အပ်ပါသည်-
(က) ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်နှစ်ဘက်သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာ၌ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူအဖြစ် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ အသိသက်သေများအဖြစ် စည်ပင်သာယာ ရေးဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပြီး ယင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်က ခန့်မှန်း ခြေစာရင်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ၊(Specifi-cations)စာချုပ်တွင် ပူးတွဲထားခြင်း ရှိ/မရှိ ရှိပါက မည်သူကစစ်ဆေး/အတည်ပြုကြောင်း၊ အတည်ပြုချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ စာချုပ်အားပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ စိစစ်အတည်ပြုခြင်းရှိ /မရှိ၊
(ခ)   ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကက်ဘိနက် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအား K&DLနှင့်မိုးကုတ်ရွှေရည်သို့ တင်ဒါချပေးရန် သဘောတူအတည်ပြု ထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ဂ)   ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့စွဲပါရုံးမိန့်အမှတ် ၇၆/၂၀၁၆ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားကြောင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ စစ်ဆေး မှု ရှိ/မရှိ  စစ်ဆေးတင်ပြမှုအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု ရှိ/မရှိ၊
(၁)  လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် စည်ပင် သာယာ​ရေးဝန်ကြီးတို့မှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော အရပ်သား (၂)ဦးပါဝင်သည့် ပြည်နယ်တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးကော်မတီ၊
(၂) ပြည်နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန မှ ဦးဆန်းထွန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၊
(၃)   မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီ၊
(ဃ)    စာချုပ်ပါအတိုင်းကုမ္ပဏီအားအရေးယူခြင်း၊ ဒါဏ်ကြေးတပ်ရိုက်ခြင်းရှိ/မရှိ၊
(င)     လုပ်ငန်းစီမံကိန်း အောင်မြင်ရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့  လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှု ရှိ/မရှိ၊
(စ)   ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လုပ်ငန်း အောင် မြင်ရေး၊ မြို့သူမြို့သားများ သောက်သုံးရေ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊
(ဆ) စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှစစ်ဆေးချက်၊ အစီရင်ခံစာပါအချက်များအရ -
(၁)အပိုဒ်(၄)တွင်ငွေကြေးထုတ်ပေးသည့်နေ့စွဲအလိုက်ဖော်ပြမထားသဖြင့်မည်သည့်     နေ့ရက်များ တွင်ငွေကြေးထုတ်ပေးမှု အဆင့် ဆင့်သိရှိလိုခြင်း၊
(၂)    နှစ်လွန် အသုံးစရိတ်အပ်ငွေထားရှိခြင်း အတွက်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၃၅/၂၀၁၇ ၂ ပိုဒ် ၁၂၅ နှင့် မညီညွတ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားသော်လည်းတာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့် ဖော်ထုတ်ထားမှု မရှိသဖြင့် သိရှိလိုခြင်း၊
(၃)   အစီရင်ခံစာ(၇)အရလုပ်ငန်းစချိန်မှစ၍ ငွေထုတ်သူအရာရှိများနှင့် ရန်ပုံငွေ ကြီးကြပ်သူအရာရှိများအဆင့်ဆင့်အား သိရှိလိုခြင်း၊
(၄)  အစီရင်ခံစာအပိုဒ်(၈)အရရေပိုက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမှုများကို စစ်ဆေးလက်ခံခြင်း ရှိ/မရှိ၊မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များက စစ်ဆေး လက်ခံသည်ကို သိရှိလိုခြင်း၊
(၅)  အစီရင်ခံစာ ၁၅(က)ပါ ၃ နှစ်ကြာမှ တည်/ကော်မှ အတည်ပြုသည့် ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် မူလစာချုပ် ချုပ်ဆိုစဉ်က တင်ပြအတည်ပြုခဲ့ သည့် ခန့်မှန်းခြေနှင့် ဒီဇိုင်းများ ကွဲလွဲမှု ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း၊
(၆)  စစ်ဆေးချိန်တွင် လက်တွေ့ ရေစမ်းသပ်ပေးဝေခြင်းကို မပြု လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် မည်သူ့ တင် တာဝန်ရှိကြောင်း သိရှိလို ခြင်း၊
(၇)       စာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာ တွင် တာဝန်ရှိဌာန၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်းရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း၊
(၈)       မြေပြင်အတိုင်းအတာနှင့် ခန့်မှန်း​ခြေစာရင်း နှိုင်းယှဉ်၍ မြေပြင်သို့ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း၊
(၉)     ရေထွက်(၄)ခုမှ ရေသွယ်တန်းမှု ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိနှင့်မြို့တွင်းသို့ အမှန်တကယ်ရေရောက်ရှိမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှုကို သိရှိလိုခြင်း၊
(၁၀) စာချုပ်ပါ ပိုက်အရည်အသွေး စံချိန် စံညွှန်း စစ်ဆေးမှု ရှိ/မရှိ၊ သတ်မှတ် အရည်အသွေး ပြည့်မှီမှု ရှိ/မရှိ သိရှိလိုခြင်း၊
(၁၁) အစီရင်ခံစာအပိုဒ်(၂၂)ပါ အားနည်း ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းပါ အခြား အာနည်းချက်များအားလုံး ငွေကြေးတန်ဖိုး မည်မျှရှိသည်ကို သိရှိလိုခြင်း၊
(၁၂)   အစီရင်ခံစာ အပိုဒ် (၁၇)အရ ပိုလျှံရေပိုက် အမြောက်အမြားရှိပြီး တန်ဖိုးငွေကျပ်သန်း (၇၁၅.၈၃၄)ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်းပိုက်များအား မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့် ပိုလျှံနေကြောင်း သိရှိလိုခြင်း စသည့် ကြယ်ပွင့်ပြ​မေးခွန်းများကို ဟားခါးမြို့နေ မြို့သူမြို့သားများကိုယ်စား မေးမြန်းအပ်ပါသည်။
စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်မှ ဖြေကြားချက်
ချင်းပြည်နယ်ဟားခါးမြို့သည် တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ် သည်နှင့်အညီ ရေကိုမြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းသော စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ရေလှောင်ကန်များမှ မြို့နေပြည်သူ လူထုထံသို့ ရေဖြန့်ဝေသည့်စနစ်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိပါ သည်။၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ စိမ့်စမ်းရေထွက်များမှ ရေထွက် နှုန်းလျော့ပါးလာသဖြင့် ဟားခါးမြို့နေပြည်သူများ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုပြဿနာ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် အတွက် ပြည်သူများတစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံး သောက်သုံးရေဖူလုံစွာ ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန် သီးမစ်ချောင်းမှ ဟားခါးမြို့သို့ရေတင်နိုင်ရေးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအား အကူအညီတောင်းခံ၍ ပဏာမတိုင်း တာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းကို မြန်မာ့အလှ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် DAM တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Main Tank များတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် DAM နှင့်Main Tank ကြား ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း အပြင် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) အကြိုတိုင်းတာရေးနှင့် ဓါတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဂ)   အနည်ကျရေစစ်ကန် Treatment Plant တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊
(ဃ) Storagetanks and Pump House
(င ) Water Supply System (ရေဖြန့်ဝေလိုင်းစနစ်)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ဟားခါးမြို့တွင်း ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောရန်ပုံငွေများ လျာထားရာတွင် ရေပေး ဝေရေးလုပ်ငန်းကို စည်ပင်သာယာရေး ဘတ်ဂျက် တွင် ထည့်သွင်းလျာထားရန် ဖြစ်သော်လည်း တစ်ပြည်နယ်လုံးအတွက် နှစ်စဉ်ခွဲဝေပေးသည့် ဘတ်ဂျက်များအနက် စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်း များအတွက်ခွဲဝေပေးသည့် ရန်ပုံငွေများပြားနေသဖြင့် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဘတ်ဂျက်တွင် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း(၂၉၀၀)အား ထည့်သွင်းလျာထား ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ချင်းပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေကျပ်သန်း(၂၉၀၀)ဖြင့် ဟားခါးမြို့တွင်း ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို တင်ဒါကော်မတီမှ lot(၄)ခုခွဲ၍ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်(၁၀-၆-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊(၁၂-၁၀-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ထည့်သွင်းကြော်ငြာ၍ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ Lot(1)လုပ်ငန်းတွင် တင်ဒါဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ(၁၂)ခု၊ Lot(2)လုပ် ငန်းတွင် တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ (၁၁)ခု၊ Lot(3)လုပ်ငန်းတွင် တင်ဒါဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ(၅)ခု၊ Lot(4)လုပ်ငန်း တွင်တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ(၄)ခု တို့အနက်မှ K&DL ကုမ္ပဏီနှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည် ကုမ္ပဏီတို့မှတင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအပ်နှံ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အညီကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း၍ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ဦးဆောင်၍ (၅.၁၀. ၂၀၁၆)ရက်နေ့၊ (၂.၃.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၈.၅.၂၀၁၇)ရကနေ့၊ (၁၂.၉.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၆.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊(၇.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ (၇.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ (၂၄.၁၀.၂၀၁၈) ရက်နေ့များတွင် အစည်းအဝေး(၈)ကြိမ် တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အပတ်စဉ် ကျင်းပသည့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးများတွင်လည်း အခါအား လျော်စွာ လမ်းညွှန်မှာကြား ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်ကျင်းပ သော အစည်းအဝေးများတွင် မြို့မိမြို့ဖ များအား ဖိတ်ခေါ်၍ အကြံအဉာဏ်များ ရယူကာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(ခ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်၍ (၂၅.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ (၅.၉.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ (၃၁.၁၀.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၁၄.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၂၈.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင် အစည်း အဝေး(၅)ကြိမ်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လမ်းပန်း ဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း စိစစ်ရေးနှင့် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလအထိ ကာလအတွင်း မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့ရုံး၌ နေ့စဉ် နံနက်(၀၉၀၀)ချိန်တိုင်းတွင် ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊ပြည်နယ်အထွေထွေညအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိနှင့် အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကော်မတီမှ တာဝန် ရှိသူများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်၍ အခက်အခဲများကို ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(ဂ) စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်၍ (၂၀.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့၊ (၁၃.၈.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ (၇.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့များတွင် ကုမ္ပဏီမှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ များကိုခေါ်ယူ၍ အစည်းအဝေး(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး ဦးဆောင်၍ အကြိမ်ကြိမ်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး/ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဆောင်၍ ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများကို ခေါ်ယူ၍ (၁၄.၈.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ (၁၄.၃.၂၀၁၈)ရက်နေ့နှင့် (၂၁.၆.၂၀၁၈)ရက်နေ့များတွင် အစည်းအဝေး(၃)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(င) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍ (၁၇.၁၂. ၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ (၁၂.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့အထိ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၃၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ စာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ မြေပြင်ကွင်းဆင်း ၍ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းအား ရာနှုန်းပြည့်ပြီးစီးနိုင်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီး အဆိုပါအခက်အခဲများကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
(က) ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊  မတူပီလမ်း၊ ဖလမ်းလမ်းနှင့်  မြို့တွင်း လမ်းသွယ်များကို ပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းရေး ဆောင်ရွက် ရာ၌ ယာဉ်များကင်းရှင်းသည့်ညပိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့် အပြင် လမ်းများကို ဖြတ်သန်း၍ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းနိုင်ရေး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြု ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းရခြင်း။
(ခ) ၂" GI ပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းခြင်း၊ Control ပေါက်များ တည်ဆောက်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရှင်များ၏ ကန့်ကွက်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ရခြင်း၊
(ဂ)  လွှတ်တော်အဆောက်အဦအတွင်းရှိ ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀)ဆံ့ ကန်မှ Sub Tank (၃)ကန်သို့ GI ပိုက်လိုင်းများ ဆက်သွယ်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း လွှတ်တော်အဆောက်အဦ တည်ဆောက်နိုင်ရေး သွယ်တန်းထားရှိပြီးသော ၆"GI ပိုက်လိုင်းများ ပြန်လည်တူးဖော် ခဲ့ခြင်းနှင့် အဆိုပါလွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ ဂါလံ(၁၀၀၀၀၀) ဆံ့ရေကန်ကို   လွှတ်တော်ရုံးသုံးရေကန်အဖြစ်    ပြောင်းလဲပေးခဲ့
ရသဖြင့် ရေကန်အစားထိုးတည်ဆောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် ခဲ့ရခြင်းနှင့် ရေကန်ထပ်မံတည်ဆောက်နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေရရှိရန် ထပ်မံတင်ပြတောင်းခံရခြင်း၊
(ဃ) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးအုပ်စု H အတွက် အစားထိုးပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့သည့်  စျေးသစ်ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်ထောင်စု(၃၇၂)စု အသုံးပြုရန် ဂါလံ(၅၀၀၀၀)ဆံ့ရေကန် (၂)ကန်ထပ်မံ တည်ဆောက်နိုင်ရေး ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ချက်အရ ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင် (၀.၂၃၃)ဧကရှိ မြေနေရာနှင့် ချင်းပြည်နယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ညှိနှိုင်းမှုဌာနပိုင် (၀.၅၉၉)ဧကရှိ မြေနေရာ များတွင်ဂါလံ(၅၀၀၀၀)ဆံ့ရေကန် (၁)လုံးစီကို အသစ်တည် ဆောက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊
(င) မြို့တွင်းလမ်းများကို လမ်းတာချဲ့ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၌ မူလ  သွယ်တန်းထားရှိသော GI ပိုက်လိုင်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး ခဲ့ခြင်း၊
(စ) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် မိုးကုတ် ရွှေရည် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော Bank Account များကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ ငွေထုတ်ယူခွင့် ကန့်သတ်ခဲ့ခြင်း၊
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့နေ ပြည်သူများအတွက် သောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်ရေး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း(၂၉၀၀)ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ အား အောက်ပါအတိုင်း အသေးစိတ် ရှင်းလင်းဖြေကြားအပ်ပါသည်-
(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်  နှစ်ဘက်သဘောတူစာချုပ်  ချုပ်ဆိုရာ၌ ခန့်မှန်းခြေစာရင်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများအား စာချုပ်တွင် နောက်ဆက်တွဲ(က)ဖြင့် ပူးတွဲထားရှိခဲ့ပြီး တင်ဒါစစ်ဆေးရေး ကော်မတီမှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းနှင့် စာချုပ်အား ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ စိစစ်၍ (၁၈.၁၁.၂၀၁၆)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၂ (၅) ၁၄ - ၁၉၀/ နပတ(၁၀၃၃)ဖြင့် စိစစ်အတည်ပြု ခဲ့မှုအရ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများအား ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး၏ (၄-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၅/၂၀၁၆)ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်(၆)အရ သဘောတူခွင့်ပြုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှအမိန့်အမှတ်(၇၆/၂၀၁၆)ဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ကော်မတီ(၃)ရပ်မှ မြေပြင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား အကြိမ်ကြိမ် ကွင်းဆင်း
စစ်ဆေးပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ တင်ပြလာမှုအပေါ်တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ဦးဆောင်၍ အစည်းအဝေး(၈)ကြိမ်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်၍ အစည်း အဝေး(၅)ကြိမ်၊ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင် ၍ အစည်းအဝေး(၃)ကြိမ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး/ ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဦးဆောင်၍ အစည်းအဝေး(၃)ကြိမ်၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍ အစည်းအဝေး(၃၂)ကြိမ် ကျင်းပ ပြုလုပ်ကာ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းတို့ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
(ဃ) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းကို K&DLကုမ္ပဏီ လီမိတက် နှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့မှ တင်ဒါအောင်မြင်၍ လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်အရ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်တွင် လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးစီး ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းပြီးစီးမည့်ရက်အား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလကုန်အထိ တိုးမြှင့်ပြောင်းလဲပေးပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၀.၃.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၇)ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၄)အရ ခွင့်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသဖြင့် ပထမအကြိမ်(၃၁.၅.၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးခဲ့ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာလ(၃၁)ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၇)ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၅)အရ“ပြည်နယ်အဆင့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် (၃၁.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုမရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက် သွားရန်” သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း၊ တတိယအကြိမ်အဖြစ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ (၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၁၇) ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၈)အရ “လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကြန့်ကြာသည့်အတွက် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ အတွက် သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရန်၊ လုပ်ငန်းနှစ်ခုစလုံး အား ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့ အပြီးဆောင်ရွက် ရန်နှင့် မပြီးစီးပါက သတ်မှတ် ဒဏ်ကြေး(၂)ဆပေးဆောင်ရန်” ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကော်မတီ(၃)ရပ်နှင့် ပြည်နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်း ကြားခဲ့ပါသည်။ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလည်း
စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းအားလုံး ပြီးစီးမှုမရှိခြင်းကြောင့် K&DL ကုမ္ပဏီနှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီတို့အား နောက်ကျဒဏ်ကြေး ငွေကျပ် (၃၀၄၃၆၅၃၆/-)ကို ပေးဆောင်ရန် (၁၂.၁၁.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁/ ၁ – ၂၂/ ထောက် ၄ (အထဥ)ဖြင့် ပထမအကြိမ် အကြောင်းကြားထားခြင်း၊ နောက်ကျဒဏ်ကြေး ငွေကျပ် (၇၃၈၅၄၇၅၁.၈၀/-)ကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် စာရင်းစစ်တွေ့ရှိချက် အရ လျော့နည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေထုတ်စာရင်းသို့ပြန်လည် ပေးသွင်းရမည့် ငွေကျပ်(၁၃၃၈.၈၂၈) သန်းအား(၁၂.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ အကျေပေးသွင်းရန်နှင့် သတ်မှတ် ရက်အတွင်း မပေးသွင်းပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းနှင့် သဘောတူ စာချုပ်တို့အား ရပ်စဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း(၂၁.၆.၂၀၁၉) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁/ ၁ – ၂၂/ ထောက် ၄ (အထဥ)ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် အကြောင်းကြားထားရှိပါသည်။
(င) ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဟားခါးမြို့ ရေပေး ဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမိန့်အမှတ် (၇၆/၂၀၁၆)ဖြင့် ကော်မတီ(၃)ရပ် ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ပေးအပ် ခဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းအလိုက် အားနည်းချက်များကို
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် ကြပ်မတ်ခြင်း၊ ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း အလိုက် ငွေထုတ်ယူခြင်းများကိုလည်း စစ်ဆေး၍ ခရိုင်/မြို့နယ် တည်/ကော်များ၏ စိစစ်ထောက်ခံချက်များနှင့် ရုံးတွင်းစာ အကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းများ၊ ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်း အဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တို့ဖြင့်ငွေထုတ်စေခြင်းတို့ကိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။
(စ) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်စေရန်အတွက် ချင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဖွဲ့စည်း ပေးထားသော ကော်မတီ(၃)ရပ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ လုပ်ငန်း အောင်မြင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများနှင့် မြို့သူမြို့သား များ သောက်သုံးရေ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါသည်-
(၁) မြို့တွင်းရေဖြန့်ဝေလိုင်းပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန်သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ(၂)ခု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ချင်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်မှုဖြင့် (၁၂-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ဟားခါး- ဂန့်ဂေါလမ်းဘေးရှိ ရေပိုက်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းထားသည့် သိုလှောင်ရုံအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ် ခြင်း၊ ဝမ္မသူးမောင်ဘောလုံးကွင်းပတ်လမ်းတွင် တည်ဆောက် ထားသော Control Box များနှင့် အထက(၂)ဘောလုံးကွင်း အနီး Control Box များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက် များ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။
(၂) ကုမ္ပဏီ(၂)ခုမှ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများအား လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကော်မတီဝင်များမှ (၂၅.၈.၂၀၁၇)ရက်နေ့နှင့် (၅-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊      (၃၁.၁၀.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၁၄-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ (၂၄-၁၂-၂၀၁၇ )  ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ ရေစမ်းသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(၃) မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ (၁၅.၁.၂၀၁၈) ရက်စွဲပါရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၇/၂၀၁၈)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၅.၃.၂၀၁၈) ရက်စွဲပါရုံးအမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈/၂၀၁၉)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာအားလုံး၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအားလုံးနှင့် မီဒီယာ များတွင်ကြော်ငြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရေသွယ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာ စာတွင်ကနဦးရေသွယ်ယူခအတွက် ကျပ်(၁၀၀၀၀၀/-) အား(၃)ရစ် ခွဲ၍ပေးသွင်းရန်နှင့် လစဉ်ပုံမှန်သုံးစွဲသည့် ရေယူနစ်အတိုင်း ရေမီ တာခ(၁)ယူနစ်ဂါလံ(၂၂၀)လျှင်ကျပ်ငွေ(၆၀၀/-)နှုန်းဖြင့် ပေးဆောင် ရမည်ဟုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ရေမီတာခနှုန်းထားအား(၁၂-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈)၊ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၄)အရ သတ်မှတ် ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့ ကြော်ငြာရာမှ သီးမြစ်ရေသွယ်ယူ ခွင့့််လျှောက်ထားသူ (၉၆၀)ဦးနှင့် အရစ်ကျဖြင့်ငွေပေးသွင်းသူ (၆၃၅) ဦးရှိပါသည်။
(၄) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ လမ်းပန်းဝန်ကြီး၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြို့တွင်းဖြန့်ဝေလိုင်းလုပ်ငန်းအား (၂၅.၈.၂၀၁၇၊ ၅.၉.၂၀၁၇၊ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇)ရက်နေ့များတွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံးတွင် ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိ၊ မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော K & DL ကုမ္ပဏီတို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း စဉ်နှင့် တစ်နေ့တာပြီးစီးမှုလုပ်ငန်းများအား ကြပ်မတ်ခဲ့ပါသည်။ နေ့စဉ်အစည်းအဝေးအား(၁၇.၁၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇) မှ (၁၂.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့ အစည်းအဝေးအမှတ် စဉ်(၃၂/၂၀၁၉)အထိကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မြို့တွင်းရေဖြန့်ဝေလိုင်းတွင် ရေတင်ခြင်းနှင့် ရေဖြန့်ဝေမည့်ဝန်ထမ်းများစွာ လိုအပ်သောကြောင့် ယာယီနေ့စားဝန်ထမ်းများအား(၁)လလျှင် ကျပ်(၆၀၀၀၀/-) နှုန်းဖြင့် (၃၅)ဦးအား (၁၂-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၈)၊ ဆုံးဖြတ်ချက်(၂၄)အရ ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
(၅)   K&DL နှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းကြန့်ကြာမှုမရှိစေရေးအတွက် ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းစဉ် ပြည်သူများနှင့် အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ချင်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အင်ဂျင်နီယာများမှမြို့နယ်/ရပ်ကွက်ရုံး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှစာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပူးပေါင်း  ၍ ပြည်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
(၆)  ချင်းပြည်နယ် ဒုတိယလွှတ်တော်ဥက္ကဌ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ ဦးငွန်ဆန်းအောင်တို့မှ (၂.၅.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် K&DL နှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီတို့၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပိုက်အလေအလွင့် ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ကော်မတီ(၃)ရပ်နှင့် ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ အကြီးအကဲများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၇) ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေးကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်၊ ဦးခင်ဇော်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲ ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့မှ မြို့သစ်ရပ်ကွက်ရှိ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး (၂၁.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စမ်းသပ်ရေလွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၈) ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုရန် တပ်ဆင်ထားသောTrans-former (၇)လုံးသည် Manual အမျိုးအစားဖြစ်သဖြင့် မီးအတက်အကျ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် မီးအားလျော့နည်းသည့် အချိန်များတွင် ရေတင်ရန်အခက်အခဲများရှိသဖြင့် ၎င်း Trans-former(၇)လုံးအား Auto Tap Changer Transformer ဖြင့် လဲလှယ်သင့်ကြောင်း ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ အကြံပြု သဖြင့် (၁၂-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၈)၊ ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄)အရ Auto Tap Changer Transformer (၇)လုံး ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရန်အတွက် GRFမှ ဦးစားပေးလျာထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် GRF ရန်ပုံငွေကျပ် (၁၆၃.၀၀၀)သန်းဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ချာချာကုမ္ပဏီမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး(၂၁.၅.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ Auto Tap Changer Transformer ဖြင့်လဲလှယ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သည့်အချိန်မှစ၍ ရေတင်ပို့ရာတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့ ခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် တစ်နာရီ ရေတင်နှုန်း ဂါလံ(၄၀၀၀၀) (၂၄နာရီ ဂါလံ ၉၆၀၀၀၀) တင်ပို့နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(၉) ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှု လက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုးထက် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင် ရပ်တန့်နေခဲ့သော ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက် မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုများကို စနစ်တကျ စိစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဤရုံး၏ (၁၄.၆.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ ရုံးမိန့်အမှတ် (၄၅/၂၀၁၈)ဖြင့် စည်ပင် သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးအား အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်၍ အဖွဲ့ဝင်(၁၆)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ သည် မြေပြင်ကွင်းဆင်း၍ ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ထားသည့် Sub –Tants /Control Box များ အမှန်တကယ်တည်ဆောက်မှုရှိမရှိ၊ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း ပိုက်ဆက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စံချိန် စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အရည်သွေး ပြည့်မီမှုရှိမရှိ အကြိမ်ကြိမ်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး တည့်မတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အရည်အသွေးမပြည့်မီသည့် ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်လဲလှယ်ပြင်ဆင်ခိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁၀) သို့ဖြစ်ပါ၍ ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှလက်ရှိအချိန်တွင် သီးမြစ်ရေအမြင့်တင်စက်ဖြင့် မြို့တွင်းရေဖြန့်ဝေလိုင်းစမ်းသပ်နိုင်ရေးအတွက် ရေတင်ခြင်းအပြင် လက်ရှိအချိန်ထိ ဟားခါးထာရ်(၁/၂)ရပ်ကွက်တွင် ပြည်သူအိမ်ခြေ
(၁၀၃၂)အိမ်အား အပတ်စဉ် တစ်ပတ်လျှင်(၂)ကြိမ် ရေဖြန့်ဝေ ပေးခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများဖြစ်သော ခရိုင်ဥပဒေရုံး၊ ခရိုင်ကျေးလက် ရုံး၊ ပြည်နယ်ကျေးလက်ရုံး၊ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ ပညာရေးကောလိပ်၊ ဟားခါးကောလိပ်၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသား လူငယ်သင်တန်းကျောင်းအပြင် ဇေတဝန်ကျောင်း၊ ဟားခါးအခြေချစစ်ဗျူဟာနှင့် ချင်းပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံးတို့အား အပတ်စဉ် ရေးပေးဝေလျက်ရှိပါသည်။
(၁၁) K&DLကုမ္ပဏီနှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီတို့မှ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိသဖြင့် ဟားခါးမြို့ ရေပေး ဝေရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် (၂၂.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၉) ဆုံးဖြတ်ချက်(၁၃)အရ ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေး ကော်မတီကို ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးအား ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိအား အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အခြားဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် မြို့မိမြို့ဖများပါဝင်သော ကော်မတီအား ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၂) ထို့ပြင် ဟားခါးမြို့နှင့် ဖလမ်းမြို့များတွင် ရောဂါကင်းရှင်းပြီး အသင့်သောက်သုံးရန်သင့်လျော်သည့် ရေသန့်စင်စနစ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၉)ဆုံးဖြတ်ချက်(၄၂)အရ “ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာ ရေးအဖွဲ့နှင့် Oji Holing Corporation တို့မှအဆိုပြုတင်ပြ လာသည့် ဟားခါးမြို့( 600,000 Galon/Day)အတွက် ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်(1.62)Million USD၊ ပစ္စည်းများလဲလှယ်စရိတ် အတွက်(260000) USD၊ ဖလမ်းမြို့အတွက်(90,000)USD၊ (50,000 Gallon/Day) အတွက်(1.50)Million USD၊ ပစ္စည်း လဲလှယ်စရိတ်အတွက် (200,000)USD အား JICA မှ ကူညီထောက်ပံ့မည့် SDGs ​ထောက်ပံ့ငွေ(Grants)ဖြင့် ထောက်ပံ့မှု ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည် အဆိုပြုချက်အပေါ် စိတ်ပါဝင်စား ပါကြောင်းနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ(Grants)အဖြစ် ရရှိပါက လက်ခံနိုင် ပါကြောင်း” ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ JICAနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ထားရှိမှု အခြေအနေကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
(၁၃) ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍မြေပြင် အခြေအနေမှန်အား စိစစ်သုံးသပ်နိုင်ရန်အတွက်(၈.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၉)ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၅)အရ “ပြည်နယ်စာရင်စစ်ရုံးချုပ်မှ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီ အမြန်ဆုံးစိစစ်၍ ပြန်လည် တင်ပြရန်”နှင့် သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့မှုအရ ပြည်နယ်တည်/ကော်မှ (၁၃.၃.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့် တာဝန်ပေးအပ် ချက်အရအဖွဲ့(၆)ဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁၄) ဟားခါးမြို့ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် K&DLကုမ္ပဏီနှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည် ကုမ္ပဏီတို့သည် လုပ်ငန်းများအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနမှ နောက်ကျဒဏ်ကြေးပေးသွင်းရန်နှင့် လာရောက်ဖြေရှင်းရန် (၂)ကြိမ်တိုင်တိုင် အသိပေးအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများအား (၁၂.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့အတွင်း သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ရက်တွင် လာရောက်ဖြေရှင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ လုပ်ငန်းများအားလုံးရပ်ဆိုင်း၍(၂၂.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ် သော ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၅/၂၀၁၉) ဆုံးဖြတ်ချက်(၁၃)အရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့သို့ လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်း ဆောင်ရွက်စေသွားမည်။ ပေးသွင်းရမည့် ဒဏ်ကြေးငွေကျပ်(၇၃၈၅၄၇၅၁.၈၀)နှင့် စာရင်းစစ် စိစစ်တွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအရ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအသီးသီးမှ ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည့်ငွေများအား မပေးသွင်းပါက တရားမကြောင်း အရ တရားစွဲဆို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁၅) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေကျန်ရှိမှုအခြေအနေမှာ K&DL ကုမ္ပဏီထံ ထုတ်ပေးရန် ကျန်ရှိသော(၂၅%)ဖြစ်သည့် ငွေကျပ်(၁၀၅.၇၂၅)သန်း၊ မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီထံ ထုတ်ပေးရန် ကျန်ရှိသော (၂၅%)ဖြစ်သည့် (၈၃.၉၂၅)သန်း၊ K&DLကုမ္ပဏီမှပေးသွင်းထားရှိသော Performance Granttee ငွေကျပ်(၂၁.၁၄၅)သန်း၊ မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီမှ ပေးသွင်း ထားရှိသော Performance Granttee ငွေကျပ် (၁၆.၇၈၅)သန်း၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ မြေပြင်ပစ္စည်း လက်ကျန်ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ်(၆၄၉.၉၇၈)သန်းနှင့် လျော့နည်း ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါစာချုပ်ပါ တာဝန်ရှိမှုကို အခြေခံ၍ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ ပေးလျော်ရန် တွက်ချက်ထားသည့် K&DL ကုမ္ပဏီမှ ငွေကျပ် (၁၂၉၀.၅၂၈)သန်း၊ မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီမှ ငွေကျပ်(၄၈.၃၀၀)သန်း၊  သတ်မှတ်ရက်အတွင်း  ပြီးစီးမှုမရှိခြင်းကြောင့်  နောက်ကျဒဏ်ကြေးပေးသွင်းရမည့် K & DL ကုမ္ပဏီမှ ငွေကျပ် (၁၉၉၄၂၉၁.၆၀)၊ မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီမှ ငွေကျပ်(၉၃၈၃၀၃၁.၈၀)၊ စုစုပေါင်းငွေကျပ်(၂၂၂၇.၇၆၃)သန်းကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထိန်းသိမ်းပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာသို့ ပေးသွင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁၆) ဟားခါးမြို့တွင်းရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ (၂)ခုအား ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ဟားခါး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမဦးစားပေးဖြစ်သော မြို့သစ်နှင့် စျေးသစ်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ Group (၆)ခုမှ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်ဆောင် ရွက်နိုင်ရန် ကုန်ကျမည့် ငွေကျပ်(၂၂၀)သန်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ထည့်သွင်းလျာထား လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ Group (၆)ခုမှ လုပ်ငန်းများအား ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ပေးပါက လူနေအိမ်ခြေ(၁၂၉၆)အိမ်အား ရေပေးဝေနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်သော C,D,E,F Group (၄)ခုနှင့် တတိယဦးစားပေးဖြစ်သော A,B Group(၂)ခု အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ကုန်ကျမည့်ငွေ ကျပ်(၄၀၀)သန်းခန့်မှန်း ထားပြီး အသေးစိတ်ကုန်ကျမှုအား ရေပေးဝေရေးပညာရှင်များနှင့် ကွင်းဆင်းစိစစ်၍ တွက်ချက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျငွေများအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (GRF, RE)သို့မဟုတ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် BE တွင် လျာထားတင်ပြတောင်းခံ၍ ရရှိပါက ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများကို အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွာမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူများ ရေလုံလောက်စွာရရှိ သုံးစွဲ နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဆ) ဟားခါးမြို့ သောက်သုံးရေရရှိရေး ကျပ်သန်း(၂၉၀၀)ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
စဉ် Lot No ​ နေ့စွဲ ပြီးစီးမှု သင့်ငွေ
၁။ Lot 1 ၂၁.၁၁.၂၀၁၆ ၃၀% ၃၁၉.၀၅၀
၂၃.၁၂.၂၀၁၆      ၂၀%       ၂၁၂.၇၀၀
၇.၃.၂၀၁၇      ၂၅%       ၂၆၅.၈၇၅
၁၇.၈.၂၀၁၇      ၂၅%       ၂၆၅.၈၇၅
ပေါင်း                         ၁၀၀%      ၁၀၆၃.၅၀၀
၂။ Lot2၂၁.၁၁.၂၀၁၆ ၃၀% ၃၂၃.၃၇၀
၂၃.၁၂.၂၀၁၆      ၂၀%       ၂၁၅.၅၈၀
၇.၃.၂၀၁၇      ၂၅%       ၂၆၉.၄၇၅
၁၇.၈.၂၀၁၇      ၂၅%       ၂၆၉.၄၇၅
ပေါင်း                        ၁၀၀%     ၁၀၆၃.၅၀၀
၃။ Lot3၇.၃.၂၀၁၇ ၅၀% ၂၁၁.၄၅၀
၁၂.၄.၂၀၁၇       ၂၅%        ၁၀၅.၇၂၅
ပေါင်း                          ၇၅%       ၃၁၇.၁၇၅
စဉ် Lot No ​နေ့စွဲ ပြီးစီးမှု သင့်ငွေ
၄။ Lot4၃.၇.၂၀၁၇ ၅၀% ၁၆၇.၈၅၀
၁၂.၄.၂၀၁၇     ၂၅%          ၈၃.၉၂၅
ပေါင်း                        ၇၅%       ၂၅၁.၇၇၅
(ဇ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကျော်လွန်သုံးစွဲရန်အတွက် ချင်းပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ဦးစီးဌာန၏တင်ပြချက်အရ လုပ်ငန်း အမြန်ဆုံးပြီးမြောက်ရေးကို ရည်ရွယ်၍(၁၀.၃. ၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၇)ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၄)အရ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေကျပ်သန်း(၂၉၀၀)၏(၂၅%)ဖြစ် သောကျပ်(၇၂၅)သန်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကျော်လွန်သုံးစွဲ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ (၁၆.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သော ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၇)ဆုံးဖြတ်ချက်(၃၀)အရ “သင့်တော်သော ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ခေတ္တထိန်းသိမ်း ခွင့်ပြုကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအပေါ်မူတည်၍ထုတ်ပေးခွင့်ပြုကြောင်း” ဆုံးဖြတ်ချက်တို့အရ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုတွင် အပ်ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(စျ) ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ငန်း စချိန် မှစ၍ ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ငွေထုတ်သူအရာရှိများနှင့် ရန်ပုံငွေကြီးကြပ်သူ အရာရှိ တို့အား ပူးတွဲပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်။ ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးအတွက်ရရှိသည့် ခွင့်ပြုရန်ပုံ ငွေများသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ ဖြစ်သဖြင့်ရန်ပုံငွေကြီးကြပ်သူအရာရှိများနှင့်ငွေထုတ်သူ အရာရှိများသည် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အတည်ပြု ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ ငွေသွင်း /ငွေထုတ်ခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ည) Lot(1)(2)လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်ရေပိုက်ပစ္စည်းရောက်ရှိ မှုအား သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ QA, AC အဖွဲ့၏စိစစ်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပ်နှံရခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး ကော်မတီမှ ရေပိုက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမှုကို စစ်ဆေးလက်ခံကြပါသည်။
(ဋ) စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက် အပိုဒ်(၂၁) (ဒ)အရ လုပ်ငန်း လက်ခံသူအနေဖြင့် ပိုက်လိုင်းများနှင့်ရေကန်နေရာများအား အသေးစိတ်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ၍၎င်းရလဒ်များအပေါ်တွင်သာ အခြေခံသော Designတစ်ခု ထုတ်ယူပါမည်ဟု သဘော တူပါရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြသော Design &Estimate များကို ဤရုံးမှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှစိစစ်ရာတွင် လုပ်အားခ တွက်ချက်မှုမပါရှိခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူများ လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြရန် အကြောင်းကြားသော်လည်း လာရောက်ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း၊ လာရောက်၍ စစ်ဆေးခံရာ တွင်လည်းDesignတွင်ပါရှိသည့် ပိုက်အလျားနှင့် Estimate တွင် တွက်ချက်ထားသည့် ပိုက်အလျားကွာခြားခြင်း၊ Designတွင်ပါဝင်သည့် ပိုက်ဆိုဒ်နှင့် မြေပြင်တွင် ဆောင် ရွက်ထားရှိသည့် ပိုက်ဆိုဒ်များကွဲလွဲခြင်း၊ Layout Plan နှင့် Estimate များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍မရခြင်း၊ ခန့်မှန်း တွက်ချက်မှုစာရင်းတွင် PE လက်မှတ်ရ Designer တစ်ဦး ဦး၏ တာဝန်ယူထောက်ခံထားသော Design & Estimate မရှိခြင်း၊တွက်ချက်မှုများမှားယွင်းကွဲလွဲခြင်းများစိစစ်တွေ့ရှိရပါသဖြင့် (၃)ကြိမ်တိုင်တိုင် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများစိစစ်ရေး ကော်မတီသို့ Design &Estimate များ ပေးပို့ချိန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
(ဌ) ဟားခါးမြို့ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၏ လမ်းညွှန်မှု၊ စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီး၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှု၊ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၊ အရည်အသွေးစိစစ်ရေး ကော်မတီနှင့် မြို့နယ်လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးကော်မတီ အဆင့်ဆင့် တို့မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အနီးကပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ခဲ့သော်လည်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေးလုပ်ငန်း စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီရေးကို အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ တင်ဒါအောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီသာဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်က စစ်ဆေးချိန်တွင် ရေစမ်းသပ်ပို့လွှတ်နိုင်ရေး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၏ တာဝန်သာဖြစ်၍ ရေစမ်းသပ် ပို့လွှတ်နိုင်မှုမရှိခြင်းသည် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင် ရွက်သည့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီနှင့် K&DLကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
(ဍ) စာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရာတွင်တာဝန်ရှိသူ၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမှ စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဎ) ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစိစစ်ရေးနှင့်ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ၏ ၁၄.၁.၂၀၁၉ ရက်စွဲပါစာအရ ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းအတည်ပြုချက်အပေါ်ချင်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ မျက်မြင် ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(ဏ) ရေထွက်(၄)ခုမှ ရေသွယ်တန်းပြီးစီးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍မူလ ရေထွက်နေရာတွင် ရေစုကန်တည်ဆောက်ထား မှုမရှိခြင်း နှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ရေထွက် (၂)နေရာတွင် ပိုက်သွယ်တန်းထားခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် မြို့တွင်းသို့ အမှန်တကယ် ရေရောက်ရှိမှု ရှိ/မရှိကို Main Tank မှ သက်ဆိုင်ရာ Sub Tank များသို့ စစ်ဆေးချိန်တွင် ရေဖြန့်ဝေမှုမရှိပါသဖြင့် ရေရရှိမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
(တ) ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ပေးအပ်ချက် အရ ဖွဲ့စည်းထားရှိသော ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေး ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီ(၃)ရပ်တို့က စစ်ဆေးခြင်း၊ လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဆောင်သော ရေးရာကော်မတီများမှ စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စာချုပ်ပါ ပိုက်အရည် အသွေး၊ စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီမှု ရှိမရှိကို တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းမှ တင်ဒါရရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
(ထ) အစီရင်ခံစာအပိုဒ်(၂၂)ပါအားနည်းချက်များအတွက် ငွေကြေးတန်ဖိုးအတိအကျတွက်ချက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သာမန်အားဖြင့် ရေကန်(၁)လုံး ဆောက်လုပ်သည့် စရိတ်မှာ ကျပ်(၃,၄၄၈,၅၂၁.၂၂) ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်အခြားအားနည်းချက်များကိုလည်း တိကျစွာ တွက်ချက်နိုင်ရန် အခက်ခဲရှိပါသည်။
(ဒ) သတင်းစာကြော်ငြာပါတင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် ပါဝင် သော ပစ္စည်းအရေတွက်အတိုင်း တင်ဒါအောင်မြင် သော ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီ နှင့် K&DLကုမ္ပဏီတို့မှ ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့် Designနှင့်Estimateတို့နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးချက် အရ ပိုလျှံရေပိုက်များဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပိုလျှံရေပိုက်များကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိ ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဟားခါးမြို့ ရေပေး ဝေရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည့် အတိုင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းများအောင်မြင် နိုင်ရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စီစဉ်ထားရှိပါကြောင်း ဖြေကြားလိုပါသည်-
(က) ဟားခါးမြို့ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော K&DL ကုမ္ပဏီနှင့် မိုးကုတ်ရွှေရည်ကုမ္ပဏီတို့အား ပြည်နယ်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၂၁.၆.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာရောက်ရှင်းလင်းရန် နှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအရ လျော့နည်းဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက် ငွေများနှင့် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည့် ငွေများကို (၁၂.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရန် အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ရာ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက တရာမကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ)  လုပ်ငန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်    ဆယ်တင် ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့် ငွေသားအနေဖြင့်
(၁) ကုမ္ပဏီ၏ (၂၅%)လက်ကျန်ငွေနှင့်     ၂၂၇.၅၈၀သန်း Performance Granttee
(၂) မြေပြင်ပစ္စည်းလက်ကျန်တန်ဖိုး          ၆၄၉.၉၇၈သန်း
(၃) နောက်ကျဒဏ်ကြေး                                  ၁၁.၃၇၇သန်း
(၄) လျော့နည်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်          ၁၃၃၈.၈၂၈သန်း ကုမ္ပဏီထံမှ ပြန်လည်ရရှိရန်
(၅) စုစုပေါင်း                                             ၂၂၂၇.၇၆၃သန်း ကို ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထိန်းသိမ်းပြီး နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေသို့ ပေးသွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရပ်ဆိုင်းပါက ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ရုံးမိန့်အမှတ်(၁၅/၂၀၁၉)ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် ထားသော ဟားခါးမြို့ရေပေးဝေရေးကော်မတီမှ ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများကို ပထမဦးစားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက် မည် လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျမည့်ငွေကျပ်(၂၂၀)သန်းအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် ထည့်သွင်း လျာထားလျက်ရှိပြီး ဒုတိယဦးစားပေးနှင့် တတိယဦးစားပေး လုပ်ငန်းများဆောင်းရွက်နိုင်ရန် ရေပေးဝေရေးပညာရှင်များနှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး အသေးစိတ်ကုန်ကျငွေများအား တွက်ချက်၍ ပြည်နယ်အထွေထွေ ပိုလျှံရန်ပုံငွေ (GRF သို့မဟုတ် RE, BE )တို့တွင် တင်ပြတောင်းခံ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(င)  ထို့ပြင် JICA အဖွဲ့အစည်း၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။